Taorian'ny Ralec sy Yageo, Walsin, UNI ROYAL ary mpamokatra maro hafa dia nampiakatra ny vidin'ny fanoherana - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Taorian'ny Ralec sy Yageo, Walsin, UNI ROYAL ary mpamokatra maro hafa dia nampiakatra ny vidin'ny fanoherana
Taorian'ny Ralec sy Yageo, Walsin, UNI ROYAL ary mpamokatra maro hafa dia nampiakatra ny vidin'ny fanoherana
Taorian'ny fanitsiana nataon'i Ralec sy Yageo ny vidin'ny fanoherana, dia nanara-dia ihany koa Walsin, UNI ROYAL ary mpamokatra hafa ary namoaka fiakaran'ny vidiny ato ho ato.
Araka ny fampitam-baovao Taiwan Zhongshi Electronic News, hitombo 10-15% ny baiko vaovao an'i Walsin, ary hitombo 20% ny fanoherana ny UNI ROYAL, mpanamboatra mpanohitra faharoa lehibe indrindra eran-tany.
Mikasika ny vaovao fampisondrotana ny vidiny, Walsin dia namaly fotsiny fa ny vidiny dia ho faritana arakaraky ny famatsiana sy ny fangatahana eo amin'ny tsena. Nanantitrantitra ihany koa i Walsin fa ny tsenan'ny resistor puce dia tena tsara. Afa-tsy ny vokatra sasany vita semi-vita, tsy misy lisitra momba ny vokatra vita. Saingy, ny orinasa dia tsy mikasa ny hanitatra ny famokarana amin'ny resistors chip amin'ny 2021.
Raha ny fampandrenesana ny fiakaran'ny vidim-piainana voarain'ny agents, Walsin dia nitombo 15% tamin'ny famaritana habe lehibe toa ny 0603, 0805, ary 1206, ary nampitombo ny 10% amin'ny famaritana habe kely toa ny 0201 sy 0402 ho an'ny telefaona finday. Mihatra amin'ny vidiny vaovao ny kaomandy vaovao.
Nasongadin'ny tatitra fa mifototra amin'ny zavatra niainana taloha, matetika i Walsin dia tara ao aorian'ny fanitsiana ny vidin'i Yageo ampahefatra, fa ny onjan'ny fanitsiana ny vidiny farany dia haingana kokoa noho ny teo aloha. Mino ny indostria fa ny fitanisan'i Chaozhou Sanhuan ho an'ireo mpanamboatra andalana faharoa dia nisondrotra nanerana ny solaitrabe, izay nanafaingana ny fiakaran'ny vidin'ny mpamokatra fanoherana hafa.
Ho fanampin'izay, Rubycon, foibe famokarana aliminioma fahatelo lehibe indrindra ao Japon, dia namoaka fampandrenesana fiakarana vidiny ihany koa tamin'ny herinandro lasa teo. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny akora, ny fameperana ny famokarana ateraky ny valan'aretina COVID-19, ary ny fiakaran'ny vidim-piainana, nanomboka nanangana ny vokatra ny orinasa tamin'ny 1 martsa.